I-Colonial Villa: 3BHK Enokubukeka Okuvelele
Leli yikhaya elihle elinamagumbi okulala angu-3 elinokubukwa kwentaba okuvelele. Leli khaya lakhiwe ngothando olukhulu nokuzinikela futhi silivulela izivakashi ezifuna ukujabulela imvelo ebabazekayo nokuhlala ngokukhululeka.
I-villa ihlezi eceleni kwegquma elibheke isigodi, ibonisa ukubukwa kwe-panoramic yasemaphandleni. Ihlala endaweni elingana ihektha elilodwa, ngakho-ke kunesikhala esanele sokuthi izingane nezilwane ezifuywayo zigijime.
Ake ngikuhambise endlini
-Indlu inezindawo zokungena ezimbili, enye yazo iyindawo enhle yokungena ukusuka ohlangothini olungaphambili lwendlu enezitebhisi ezinhle ezikhuphukela egumbini lokuhlala. Enye indawo yokungena ibheke ngemuva, futhi ikuyisa ngqo kwelinye lamagumbi okulala anezitebhisi ezi-2/3 ezilenza lifanele abantu abadala.
-Ihholo linetafula lokudlela elinezihlalo ezingu-8 kanye nosofa okwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayishumi. Kunamashalofu ezincwadi amaningi endaweni yokuhlala kodwa agcinwa ekhiyiwe njengoba equkethe nezinto zomndeni eziyimfihlo.
-Ikhishi lihlome ngokuphelele ngesitofu segesi, i-microwave, isiqandisi, isihlanzi samanzi futhi inakho konke okudingwa umndeni ukuze wenze ukudla futhi udle. Ungakwazi futhi ukuqasha umpheki wasendlini ukuze enze ukudla ngenkokhelo, noma ukhethe uhlelo lwethu lokudla.
-Kunamagumbi okulala ama-2 nhlangothi zombili zehholo, futhi ayafana. Banezindlu zokugezela ezinamathiselwe, kanye nemibhede yamapulangwe elingana nenkosi. Womabili amakamelo futhi anamasofa ohlobo lwe-dewaan nama-balconi, lapho ungajabulela khona ukubukwa okuhle kwamagquma azungezile. Amakamelo okulala ane-air-conditioning, futhi anamakhabethe ezivakashi.
- Igumbi lesithathu lihlala lihlukene nendlu, futhi linokungena okuhlukile ngemuva kwendlu. Le ngxenye yendlu nayo inendawo yokuhlala nendawo yokugezela ehlukile, kanye ne-balcony. Igumbi lokulala linesiphephetha-moya, futhi linamakhabethe ezivakashi.
Le ngxenye yendlu ifanele imindeni eza njengengxenye yeqembu elikhulu, ngakho-ke banendawo yabo ngenkathi beyingxenye yeqembu elikhulu.
Indlu inemidlalo yebhodi, ikhilikithi, ibhodi le-carrom kanye ne-trampoline efakwe ngaphandle ukuze isetshenziswe.
Le villa isendaweni enesango, eduze kweDinosaur Park edumile eLonavala.
Kude ibanga elifushane ukusuka kuthelawayeka. Kuthatha imizuzu emi-5 ukusuka kuthelawayeka, nemizuzu engama-20 ukusuka enkabeni yedolobha laseLonavala.
Yindawo enhle enombono omuhle wezintaba ze-Sahyadri nhlangothi zonke ze-villa.
Izivakashi zizonakekelwa ngumnakekeli oqeqeshiwe wamahora angu-24. Ngizohlala ngitholakala ocingweni.